Akwụkwọ ikike - AOOD Technology Limited
Ozi akwụkwọ ikike
Dị ka onye na -eweta mgbanaka mgbanaka eletrik na ụwa niile, AOOD nwere cores atọ: teknụzụ, ịdị mma na afọ ojuju. Ha bụ naanị ihe kpatara na anyị nwere ike ịbụ onye ndu. Teknụzụ dị elu na ịdị elu dị elu na -eme ka ike asọmpi nke AOOD, mana ọrụ zuru oke na nke zuru oke na -eme ka ndị ahịa dabere na anyị.
Igodo ọrụ ndị ahịa na AOOD bụ ọkachamara, ngwa ngwa yana nke ọma. A zụrụ ndị otu ọrụ AOOD nke ọma, nwee nka ọkachamara ọkachamara yana ezigbo agwa ọrụ. Nsogbu ọ bụla onye ahịa ahụ kpọtụrụ aha, a ga-aza ya n'ime awa 24 ma ọ bụrụ ire ere ma ọ bụ ire ere.
Akwụkwọ ikike mmesi obi ike
A na -ekwe nkwa nkeji mgbakọ mgbanaka mgbanaka AOOD niile maka otu afọ ewezuga ngwaahịa pụrụ iche, nke na -enye gị ohere iweghachi akụkụ ọ bụla nwere nkwarụ maka nnọchi n'ime otu afọ site na ụbọchị ịzụrụ ihe mbụ na akwụkwọ ọnụahịa,
1. Ọ bụrụ na achọpụtara nkwarụ ọ bụla na akụrụngwa na/ma ọ bụ ọrụ aka, nke na -ebute ọdịda adịghị mma.
2. Ọ bụrụ na mgbanaka mmịfe emebi site na ngwugwu na -ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ njem.
3. Ọ bụrụ na mgbanaka mgbapụ enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru ojiji kwesịrị ekwesị.
IHE: Ọ bụrụ na -atụ anya na a ga -eji mgbakọ mgbanaka mgbanaka mee ihe na gburugburu dị egwu ma ọ bụ na -emebi emebi, biko gwa anyị okwu doro anya, yabụ anyị nwere ike ịme ngwaahịa ahụ ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche iji mezuo atụmanya gị.